The Game (1997) | MM Movie Store
The Game ဇာတျကားဟာ Seven(1995),Fight Club(1999) စတဲ့ဇာတျကားတှကေို ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောဒါရိုကျတာ David Fincher ရဲ့လကျရာဖွဈပွီး မငျးသားကွီး Michael Douglas အဓိကပါဝငျထားပါတယျ…။
The Game ဆိုတဲ့အတိုငျးပဲ Mission Complete ဖွဈဖို့ ကွိုးစားရပုံတှကေို အခြိတျအဆကျမိမိရိုကျကူးထားပါတယျ။ဒီဇာတျကားက အစပိုငျးမှာ ပွငျးထနျတဲ့ ခံစားခကျြတဈခြို့နဲ့ အစခြီ ခပြွထားခဲ့ပွီး အတျောပဲဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ ဇာတျလမျးကို အကကြွမျးစခေဲ့လို့ ပေါ့ပါးသှားပမေယျ့ ဇာတျကားရဲ့မေးခှနျးတှဖွေဈတဲ့ ဘဝရဲ့ ရှငျသနျနထေိုငျမှု ခံစားခကျြ ခံယူခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့မေးခှနျးတှကေတော့ ခေါငျးထဲက မထုတျနိုငျဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ဘဝမှာ ရှငျသနျနထေိုငျမှုက ဘာအတှကျလဲ?
ဘယျလိုခံစားခကျြတှနေဲ့ ရှငျသနျနထေိုငျကွမလဲ?ကိုယျ့ဘဝတဈခုလုံးက တဈခွားလူတဈယောကျရဲ့ Game တဈခုသာဖွဈနခေဲ့ရငျရော?
The Game ဇာတ်ကားဟာ Seven(1995),Fight Club(1999) စတဲ့ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာ David Fincher ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီး Michael Douglas အဓိကပါဝင်ထားပါတယ်…။
The Game ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Mission Complete ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရပုံတွေကို အချိတ်အဆက်မိမိရိုက်ကူးထားပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားက အစပိုင်းမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့နဲ့ အစချီ ချပြထားခဲ့ပြီး အတော်ပဲဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်လမ်းကို အကျကြမ်းစေခဲ့လို့ ပေါ့ပါးသွားပေမယ့် ဇာတ်ကားရဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဘဝရဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်မှု ခံစားချက် ခံယူချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ ခေါင်းထဲက မထုတ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘဝမှာ ရှင်သန်နေထိုင်မှုက ဘာအတွက်လဲ?
ဘယ်လိုခံစားချက်တွေနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ကြမလဲ?ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးက တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ Game တစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ရင်ရော?
(Up Sream) Large Size ~ Download